यहि आषाढ १७ गते युग पाठकको दोस्रो पुस्तक सार्वजनिक हुँदै
कला साहित्य 11 पटक पढिएको हेटौंडा अनलाइन २०७४ आषाढ १४ बुधवार
आषाढ १४ बुधवार, हेटौंडा । युग पाठकको दोस्रो पुस्तक ‘माङ्गेनाः नेपाल मन्थन’ यही असार १७ गते विमोचित हुने भएको छ । पुस्तक एक दर्जन बढी विषयमा पाठकले लेखेका वैकल्पिक चिन्तनहरु सहितको गैरआख्यान हो ।
नेपालको सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक इतिहास लेखनमा शासकीय दृष्टिकोण अपनाइएको र यसलाई जनताको दृष्टिकोणबाट लेखन गर्नुपर्ने आवश्यकता महशुस गरेर पुस्तक लेखेको पाठकले बताएका छन् । पुस्तकमा इतिहास, विकासको भाष्य, मिडिया, बौद्धिकता लगायतका विषयमाथि अनुसन्धानमुलक आलेखहरु संकलित छन् ।
इतिहास लेखनमा विश्वमा विजेता शासकहरुको इतिहास लेख्नेक्रम चलिरहँदा ‘द पिपुल्स हिस्ट्री अफ द वल्र्ड’ लेखेर क्रिस हर्मनले जनताको दृष्टिकोणबाट इतिहास लेखनको आवश्यकतामाथि प्रकाश पारेका थिए । त्यस यता विश्वभर विजेता शासकहरुको होइन कि शासित जनताको पनि इतिहास हुने र त्यसलाई इतिहासकारहरुले लेख्नु पर्नेबारेमा ठुलो बहस सिर्जना भएको थियो ।
नेपालमा भने, यसको सुरुवात कसले गरेको भनेर स्पष्ट नभए पनि यसमा प्रसस्त कलम चलाउनेमा प्रध्यापक कमलप्रकाश मल्लको नाम अग्रस्थानमा आउने गरेको छ । नेपालको इतिहास लेखनमा नयाँ आयाम थप्नेमा मल्लको ठुलो योगदान रहेको भन्दै पाठकले विभिन्न कार्यक्रमहरुमा उनीमाथि प्रकाश पार्दै आई रहेका थिए ।
विमोचन हुन लागेको पुस्तक ‘माङ्गेनाः नेपाल मन्थन’मा पाठकले इतिहास र राष्ट्रवादबारे प्रश्न उठाउँदै लेखेका छन्, “यो कस्तो राष्ट्रवाद हो, जसले जनताको सास्ती घटाउन कुनै पहल गर्दैन र दिल्लीतिर चोर औंला देखाएर सारा कर्तव्यबाट च्युत हुन्छ ? वर्तमानमा इमानदारिता देखाउँदैन र जनताको सकसमाथि सकस थपिरहन्छ्र । चीनतिर इशारा गर्छ र जनतालाई झुक्याइरहन्छ्र इतिहासभरी नक्कली राष्ट्रवाद यस्तै देखिएको छ्र ।”
उनले लेखेको पुस्तक ‘माङ्गेनाः नेपाल मन्थन’मा माङ्गेनाको के अर्थ हो त ? भन्ने प्रश्नमा पाठकले भने, “यो लिम्बु भाषाबाट लिईएको शब्द हो, जसको अर्थ शिर उँचो गर्ने सांस्कृतिक अनुष्ठान हुन्छ । मैले यो पुस्तकमा यसलाई दार्शनिक ढंगबाट प्रयोग गर्दै इतिहासमा दमन गरिएका सबै आम नेपाली जनताको शिर उँचो गर्नु पर्ने आवश्यकता तर्फ औलाउँदै यस शब्दलाई प्रयोग गरेको हो ।”
२०६६ चैत्र अन्तिममा उर्गेनको घोडा उपन्यास लेखेर चर्चामा आएका उनी विभिन्न समयमा वैचारिक तथा बौद्धिक लेखहरु मार्फत समाजमा आफ्नो सशक्त उपस्थिति देखाइरहेका छन् । अध्यापन, पत्रकारिता, साहित्यीक गतिविधिमा लागेका पाठकको उद्गम थलो हेटौंडा हो । पाठकलाई हेटौंडा सन्देश दैनिक र प्रयास साप्ताहिकको कार्यकारी सम्पादक, द न्यु पेपरको सम्पादकमा रहेर काम गरेको लामो अनुभव छ ।
पाठकको प्रकाशित पहिलो उपन्यासमा उनले लेखेको एक वाक्यले नै उनले गर्दै गरेको कामको झल्को दिन्छ जहाँ उनले लेखेका छन्, “यो पुस्तक तामाङ जाति र राज्यहरुको मौखिक इतिहास, किंवदन्ती एवम् लोककथाहरुको खोज÷संकलनमा आधारित रहेर सिर्जना गरिएको हो । जसले तामाङहरुको इतिहास कथ्छ ।”
13157895	Times Visited.